Linux-yakavakirwa pamba otomatiki masisitimu | Linux Vakapindwa muropa
Kumba michina iri kuwedzera zvakanyanya kuita kuti dzimba dzedu dzive nenjere uye kuita kuti hupenyu huve nyore kwatiri. Silk Labs yatanga mushandirapamwe paKickStarter yekuunganidzwa kweiyo nyowani imba otomatiki chigadzirwa chinonzi Sense. Iyi kamera yekutarisa, ine hunyanzvi hwekushandisa, kuzivikanwa kwenzwi, kumeso uye chiratidzo, chakashongedzerwa neAI (Artificial Intelligence) kuti iite basa rayo.
Silk Labs inovavarira kuwana budiriro pamwe nechigadzirwa chayo chekushandisa otomatiki kumba kune kamera Smart Sense uye yakavakirwa paLinux. Chigadzirwa ichi chichawanikwa munaKurume, wegumi nemana uye nemutengo wemadhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, saka vanokwanisa kubhadhara mari yekusimudzira uye vanozopedzisira vatangwa pamusika muna Zvita wegore rino, kana mushandirapamwe wese ukafamba zvakanaka. Uye zvese nekuda kwebasa rekambani yeSilk Labs yakatora pfungwa iyi gore rapfuura kugadzira ichi chigadzirwa chitsva.
Silk Labs akaberekwa kubva kune yaimbove CTO yeMozilla Andreas Gal, pamwe nevamwe vake vakaita saChris Jones, aivandudzawo Firefox OS, uyo akabatanidzwa naMichael Vines, mumwe munhu ane mukurumbira munyika yehunyanzvi, sezvo aive director wezve tekinoroji kukambani hombe yeQualcomm. . Pasina kupokana, Mozilla neQualcomm ma greats maviri munyika yetekinoroji nyowani uye nekutenda kwavari, uye kune avo vanga vachida kupa mari mushandirapamwe uyu, isu tichakwanisa kunakidzwa neSense munguva pfupi.
Sense ine yakatarisa kutarisa, kamera yekucherechedza iyo inogona kuona kuvapo kwevanhu, kuziva izwi rako, kuziva zviratidzo, kudzidza zvido zvemushandisi nekuda kweAI yayo, uye gadzirisa otomatiki nemidziyo (mwenje, kudziyisa, kupofumadza, ...) izvo zvakabatana neiyi system, iri inokwanisa kupindura zvakakodzera sezvatakaudzwa kubva kuSilk Labs.Iyo zvakare inopa yakakosha yekutarisa masevhisi ayo anogona kutarisirwa kubva kune yechinyakare yekuongorora kamera.
Iyo kamera iri nyore kuisa, ine 1080p resolution, 130º, infrared sensor yehusiku kuona, WiFi, Bluetooth, uye inoenderana nemhinduro dzakadai sePhilips Hue neLIFX, Sonos kurira masystem, Nest thermostats, nezvimwe. Zvese zvinoshanda nekutenda kune a Hardware ine ARM SoC, ine GPU, 2GB ye RAM, 16GB flash, pane iyo Linux yakadzamidzirwa system inomhanya. Iwo magajeti achawedzerwa, pamwe nekushanda kwavo, saka pane zvakawanda zvichauya ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux-yakavakirwa pamba otomatiki masystem